Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Febroary, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Febroary, 2017
Tantara mikasika ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana tamin'ny Febroary, 2017
Syria 28 Febroary 2017
Iràna 28 Febroary 2017
Palestina 24 Febroary 2017
Maro ireo nanohitra ny fanapahan-kevitry ny Fahefana Palestiniana handràra tantara foronina iray voalaza fa manitsakitsaka ny maoralim-bahoaka.
Tafasaraka ity Fianakaviana Mpitsoa-ponenana Syriana ity Noho Ny Fanapahan-kevitr'i Trump
Amerika Avaratra 24 Febroary 2017
Monina ao California i Gasem al-Hamad sy ny fianakaviany, nandositra ny ady tao Syria, saingy tafahitsoka ao Jordania kosa ny rahalahiny noho ny fanapahan-kevitr'i Trump momba ny mpitsoa-ponenana. Tsy fantatra hoe rahoviana vao ho tafahaona ny fianakaviana.
Iràka 24 Febroary 2017
Tonizia 21 Febroary 2017
Tamin'ny taona 2016, nampiditra lalàna momba ny fahazoam-baovao i Tonizia, saingy mbola voafetra ny fampiharan'ny governemanta izany.
Amerika Avaratra 20 Febroary 2017
Mba hanoherana ny kabary tsara lahatra feno fankahalana eo amin'ny fitondram-panjakan'izy ireo sy hanehoana ny fankasitrahan'ny Iraniana amin'ireo Amerikana mpanao fihetsiketsehana izay nitsangana nanohitra ny fandraràna fivezivezena nosoniavin'i Trump, nataon'ny Iraniana malaza tao amin'ny Twitter ny #LoveBeyondFlags [Fitiavana Mihoatra ambadiky ny Faneva]